U yeedhitaanka labada dhinac ayaa ka dambaysay markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ahaa in dib loo dhigo dhagaysiga ilaa bisha Sebtember 2020-ka.
Labada dawladood ayaa la sheegay inay isku mari waayeen dib u dhigis mar labaad lagu sameeyo dhagaysiga dacwadda, taasi oo keentay inay maxkamaddu u sheegto labada dawladood inay iyadu gaadhi doonto go'aan, ayna ka doonayso labada dawladood inay aqbalaan.
Sida ay noo sheegeen ilo diblomaasiyadeed waxaa magaalada The Hague ee xarunta maxkamadda ICJ gaadhay wufuud ka kala socota labada waddan oo ay kala hoggaaminayaan Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, iyo Sharci-yaqaanka guud ee Kenya Kennedy Ogeto.
Wufuudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaadhay The Hague kadib markii ay maxkamaddu u yeedhay, waxaana wakiillada Soomaaliya ay ka kala yimaadeen magaalada Muqdishu iyo dalkan Maraykanka.
Madaxweynayaasha labada waddan ayaa bishii hore ku kulmay magaalada New York intii uu socday kulanka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay iyadoo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku baaqay inay labada dawladood wada hadlaan, halka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in loo baahan yahay in maxkamadda ICJ ay go'aan garsoor ka gaarto muranka badda.